Inguqulelo ye-GIS ephathekayo 3, phantse yonke into ivela kwi-USB-Geofumadas
NgoSeptemba, 2012 Geospatial - GIS
Ingxelo yesithathu ye-Portable GIS yashicilelwe, isixhobo esisenzileyo Ukuhlaziywa iminyaka emithathu edlulileyo, kanye xa inguqulelo yesi-2 yaphehlelelwa ngoJulayi ka-2009. Ngendlela, ndiyakhumbula ndibhenele kule mihla apho ingxaki yedemokhrasi yaseHonduras yasinyanzela ukuba sisebenze kumakhaya ethu, kwaye phantse yonke into ivela kwi-USB ene-paranoia apha kwenzeke nantoni na.
Ndingathanda ukubona i-gvSIG 1.11 kolu hlobo kodwa kubonakala ngathi ukuzinikela ekusebenzeni kule nto akonelanga. Siyaphoswa kule nguqulo, ukuba bemkile: iDig, Geoserver kunye ne-gvSIG. Ngoku ayizisi i-Quantum GIS.
Kuyaziwa ukuba ukwenza le nguqulo baye bachasana neJava, eliliqonga ezakhelwe phezu kwazo ezi zixhobo, baphinde baphinda bathi iya kusebenza kuphela kwiWindows kwaye ayizisi ingqokelela epheleleyo eza neapache / php / mysql. Siyaqonda ukuba ukuba yi-Mysql evela e-Oracle, kungcono siye kwiPostgreSQL ebonakala ilungile kuthi ngegunya lokuba kwindawo yolwazi kwaye ihambelana nePostGIS.
Shame malunga izixhobo desktop, kodwa kunjalo yozinzo kwezobugcisa, abakwazi ukugubungela yonke ngaphandle umngcipheko zokuqinisa encinane kakhulu yokuzincama, ngaphantsi kakhulu xa.
Kodwa ke, makhe sibone oko kubuyisa i-Portable GIS 3
I-GUM 1.8.0 ye-Quantum, ngaloo mhla yazisa inguqulo ye-1.02
IPostgreSQL 9.0.6, ngaphambi kokuba ibe ne-8.4.01. Oku kubandakanya i-GRASS kunye nobuchule obumangalisayo bokuthumela ngaphandle kwiMapserver phantse ngonqakrazo olunye.
I-PostGIS 1.5.3 ekutshintsheni i-Psql Tools
I-MS4W 3.0.4 ebandakanya iMapserver 5.6 kunye ne-6.0. Phambi kokuba ize iMapserver kodwa njengeLayibrari ye-FWTools. Ngale ndlela basombulula ii-OpenLayers ezinokuthi ngoku zibizwe zivela kwi-Mapserver 6 ..
I-PgAdmin III ngoku kwi-1.12.3 version, ngaphambili yazisa i-1.10
I-Python 2.7, nayo yangaphambi kokuba ifikeleleke kumathala eFWTools
Umthwalo wendawo ufika, kunye nento esicinga ngayo ukulungisa isithuba sikaPyton sokulawula i-KML / GML kwisiseko se-PostgreSQL
I-GDAL kunye ne-ogr zihlala ziza njengezixhobo zokuthengisela iincwadi zeFWTools
Ngokubanzi, kulusizi ukuba kungasazisi ezinye izixhobo ezichazwe ekuqaleni, kodwa kubonakala ngathi kunomdla kwimizamo enokwakhiwa kwedatha, elawulwa kwindawo yogcino lwedatha kwaye yapapashwa, nangona oku kuye kwafuneka ukuba uhlale phantsi komgca C ++ ulwimi. Nangona umbhali ethembisile ukubandakanya ezinye izinto kwimfuno, ngekhe kube kubi ukuba kungabandakanywa uhlobo oluzinzileyo lwe-gvSIG kunye neGeoserver, sinethemba lokuba ingxaki ye-bitch eSpain ayikuthinteli i-gvSIG ukuba ihlale ibekiwe kule meko.
Omnye umahluko kukuba ngoku iyafumaneka ukuba ikhutshelwe kwiDropbox, edibanisa kancinci ukusukela ukuba umda we-bandwidth ulinganiselwe kwaye uye ucothe. Ukuba intlawulo iba phantse inguziro, iyarhoxiswa kwaye kufuneka kuvavanywe ngosuku olulandelayo.
Kucacile ukuba yisixhobo esingengomveliso, kodwa umdlalo othakazelisayo.
Ukusuka apha u nga khuphela
Nantsi i iforamu yokuxhasa
Esilindelekileyo kwinqaku ziquka ngokutsha gvSIG 1.12 iye isaziso njengoko yokugqibela, kodwa nangona themba lam ndikwazi ukulayisha ons ons kumanejala ukufikelela eyaphukileyo kubonisiwe: http://gvsig.freegis.ru/download / gvsig-desktop ubuyisela umyalezo wemposiso kunye http://downloads.gvsig.org/download/gvsig-desktop kokukhona kubonakala ukwenza yonke into, ngaba kuhlaziya xa ukuqalisa inkqubo.
Post edlulileyo«Ngaphambilini Uyenza njani uyilo ngeGeomap
Post Next NgoNovemba, iziganeko ezibalulekileyo ze-3 kwi-geospatial fieldOkulandelayo »
Impendulo enye kwi "GIS Portable Version 3, phantse yonke into isuka kwi-USB"